के गर्ने यदि तपाइँ एक खराब व्यक्ति जस्तो लाग्छ - दिमाग
के गर्ने यदि तपाइँ एक खराब व्यक्ति हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ
नराम्रो मान्छे हुनु भनेको के हो?
यो एउटा जटिल प्रश्न हो जुन धर्म र दर्शनले हजारौं बर्षदेखि उत्तर दिन काम गरिरहेको छ।
हामीलाई सेटहरू दिइयो नियमहरू द्वारा बाँच्न , खास तरिकाले कार्य गर्न प्रोत्साहित गरियो, र त्यसपछि हामी खराब व्यक्तिहरू भन्यौं जब हामी आफूले आशा गरेका जुनसुकै आशाहरूमा जीवन बिताउँदैनौं।
ती अपेक्षाहरू जहिले पनि धर्म वा दर्शनबाट उत्पन्न हुँदैन, यद्यपि। तिनीहरू परिवार, साथीहरू, र वरपरका मानिसहरूबाट पनि आएका हुन्।
हामी जन्ममा आमा बुबाको साथ यस्तो परिवारमा छौं जसले सामान्यतया उनीहरूको लागि अर्थपूर्ण बनाउने सुखी, स्वस्थ बच्चाहरूलाई हुर्काउन सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्। तर ती अभिभावकहरू गलत छन्। तिनीहरू सँधै सहि पाठहरू सिकाउँदैनन् वा सहयोगी प्रेमका साथ कार्य गर्दैनन्।
तिनीहरूले आफ्ना बच्चालाई सिकाउन सक्छन् कि केही विचारहरू राख्नु वा केही कार्यहरू गर्नु, चाहे जतिसुकै सौहार्दपूर्ण होस्, त्रुटिपूर्ण नैतिक चरित्र र नराम्रो प्रतिबिम्ब हो। “तपाई किन यस्तो सोच्नुहुन्छ? तपाईं किन त्यसो गर्नुहुन्छ? तिमीलाई के भयो?'
र त्यसपछि तपाईंसँग अन्य कठिनाइहरू छन् जुन जीवनसँग आउँदछ ...
उदासिनता, चिन्ता, मानसिक रोगहरू, वा अधिक शारीरिक रोगहरू भएका व्यक्तिहरू आफूले सामना गर्ने परीक्षाहरूको कारण ईन्धन हुने कार्यहरूको कारण दोषीको साथ स struggle्घर्ष गर्न सक्छन्।
अपमानजनक सम्बन्ध, दर्दनाक अनुभवहरू, र लतले यी चीजहरूको वरिपरि नकारात्मकताका कारण नकारात्मक सोच र आफुको धारणालाई उकास्न सक्छ।
मानिस खराब स्थानमा खराब चीजहरू गर्न बाध्य हुन सक्छन् किनभने उनीहरूलाई त्यस समयमा उनीहरूले यो बुझ्दछन्।
तिनीहरू अराजकपूर्ण भावनाहरूले अभिभूत हुन सक्छ कि उनीहरू कसरी नेभिगेट गर्ने भनेर बुझ्दैनन्, त्यसैले उनीहरूले खराब निर्णय गर्छन्।
तपाइँलाई तल राख्ने कोहि संग कसरी व्यवहार गर्ने
तर के त्यसले तिनीहरूलाई नराम्रो मान्छे बनाउँछ?
कुन कुराले मानिसलाई खराब बनाउँछ?
कुन कुराले मानिसलाई वास्तविक रूपमा नराम्रो बनाउँदछ वा केमा विश्वास गर्दैन तपाई कस्तो प्रकारको विश्वास प्रणाली र नैतिक संरचना अनुसरण गर्दै हुनुहुन्छ।
तर हामी यी जटिल प्रश्नहरूको ठोस जवाफ प्रदान गर्न इच्छुक छैनौं। यसको साटो, हामी एक व्यावहारिक समाधान चाहान्छौं जसले हामीलाई केन्द्रित गर्न र जमीनमा सहयोग गर्न सक्दछ जब हामी यी भावनाहरू महसुस गर्छौं र नकारात्मक आत्म-कुराकानी सुरु हुन्छ।
खराब व्यक्ति त्यस्तो व्यक्ति हुन सक्छ जसले समानुभूति बिना कार्य गर्न सचेत छनौट गर्दछ, र जसले व्यक्तिगत लाभको लागि अरूलाई फाइदा उठाउँदछ र हानि पुर्‍याउँछ।
त्यहाँ गलत व्यक्ति र गलत गर्न छनौट गर्ने व्यक्ति बीच ठूलो भिन्नता छ।
तपाईं वरपरका मानिसहरूलाई गलत र चोट पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ किनकि तपाईं अनभिज्ञ हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेर त्यति राम्रो अरू केही जान्नुहुन्न थियो।
तर यदि तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं के गरिरहनु भएको छ गलत छ र तपाईं अझै ती गलत कार्यहरू गर्न छनौट गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं हुनेछु। आफूलाई झूट बोल्दै आफैलाई भन्ने प्रयास गरेर कि तपाईं एक राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ।
राम्रो वा नराम्रो मान्छेलाई के बनाउँदछ भन्नेमा कुनै मानक छैन भन्ने धारणा केही हास्यास्पद छ। सबै जना गलत निर्णयहरू गर्ने केवल केहि गलत भ्रातृ आत्मा हुँदैन।
केहि मानिसहरु अरुको दु: ख र पीडामा साँच्चै खुशी हुन्छन्। यी व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यको प्रयोग अरूलाई तिनीहरूको शोषणको लागि शोषण गर्छन्।
प्रयास गर्नु महत्त्वपूर्ण कारक हो। यदि तपाईंले प्रयास गर्नुभएन भने, तपाईं सक्नुहुन्न र सफल हुनुहुनेछैन। आफैलाई र अरूलाई नोक्सान नदिनबाट यी नराम्रो ब्यवहारहरू सुधार गर्न कोसिस गर्दछ।
यदि तपाईं जुनसुकै खराब आचरणहरू हुन सक्ने सुधार गर्न काम गर्नुहुन्न भने, तपाईं आफू एक राम्रो, तर पतित व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर आफैलाई विश्वस्त पार्न संघर्ष गर्नुपर्नेछ।
के म विषाक्त छु? यदि तपाइँ विषाक्त हुनुहुन्छ भनेर भन्न १ W तर तरिका (+ कसरी रोक्ने)
यदि तपाईं आफूलाई वा अरूलाई निराश महसुस गर्नुहुन्छ भने, यो पढ्नुहोस्
सोच्नुहुन्छ तपाई जीवनमा शोषण गर्नुहुन्छ? यहाँ छन्9No Bullsh * t सल्लाहको बिट्स!
२० चिन्हहरू तपाईंले आफैंलाई अनादर गर्दै हुनुहुन्छ (र कसरी रोक्ने)
किन तपाईं गलत हुनुहुन्छ विश्वास गर्न को लागी तपाईं कष्ट भोग्न योग्य हुनुहुन्छ
म कसरी राम्रो मान्छे जस्तै महसुस गर्न सक्छु?
राम्रो व्यक्ति जस्तो महसुस गर्ने आधार कार्य हो। तपाईंसँग भएको खराब व्यवहारलाई सच्याउन काम गर्नुहोस् र यसलाई अधिक सकारात्मक विकल्पहरू र व्यवहारको साथ बदल्नुहोस्।
तपाईंले बोल्ने वा कार्य गर्नु अघि अन्य व्यक्तिहरूमाथि तपाईंको प्रभावलाई विचार गर्नुहोस्। आफैलाई यस्ता प्रश्नहरू सोध्नुहोस्, 'के यो दयालु छ?' वा 'यो आवश्यक छ?' र कार्यहरू लिनु अघि उत्तरहरू राम्ररी विचार गर्नुहोस्।
कहिलेकाँही हामीले कार्यहरू गर्नुपर्दछ जुन हामीलाई परिस्थितिको अधिक राम्रोको लागि खराब लाग्न सक्छ।
उदाहरण को लागी, कसैलाई पनि आलोचना गर्न मनपराउँदैन, तर कहिलेकाँहि रचनात्मक आलोचना भनेको के हो जुन हामीले काम गर्न र अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ।
व्यक्तिगत आक्रमणलाई बेवास्ता गरेर र स्थितिको तथ्यहरूमा टाँसिएर आलोचना दयाको साथ वितरित गर्न सकिन्छ।
अनावश्यक नकारात्मक कार्यहरू बेवास्ता गर्नाले ती कार्यहरूलाई अझ बढी नकारात्मकतामा उत्तेजित हुनबाट रोक्छ। तपाईं मा कम नकारात्मकता, तपाईं एक भयानक व्यक्ति हो भन्ने तपाईं विचारहरु का सामना गर्न को सजिलो छ।
के हुन्छ यदि मसँग खराब आचरण छैन तर पनि एक नराम्रो मान्छे जस्तै महसुस गर्छु?
त्यसोभए मुद्दा आफ्नो कार्यहरू लाई आफैंमा ल्याउनु भन्दा ठूलो हुन सक्छ तपाई कसरी आफैंको अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ।
के तपाइँको पूर्व तपाइँ फिर्ता चाहनुहुन्छ?
तपाईं आफू र अरूको कार्यहरू उनीहरू भन्दा खराबको गलत अर्थ लगाईरहनु भएको हुन सक्छ, वा तपाईंले आफ्नो नियन्त्रण बाहिरका चीजहरूका लागि अनुचित जिम्मेवारी लिनु भएको हुन सक्छ।
मानवता गन्दा छ। राम्रो व्यक्तिले नराम्रो चीजहरू गर्छन किनकि उनीहरूले सँधै सही निर्णय लिदैनन् वा खराब खराब सबै खराब विकल्पहरू मध्ये उत्तम विकल्प हो भन्ने सोच्दैनन्।
तपाईं पीडा र जीवन को द्वन्द्वलाई खराबताको रूपमा परिभाषित गर्दै हुनहुन्छ जब यो होईन। पीडा दु: ख हो र द्वन्द्व द्वन्द्व हो। न त यी चीजहरू नराम्रा छन् वा नराम्रोताको रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक छ।
तिनीहरू सकारात्मक नहुन सक्छन्, तर तिनीहरूले तपाईंलाई भयानक व्यक्ति पनि बनाउँदैनन्, यदि तपाईंले उनीहरूसँग संघर्ष गरिरहनु भएको बेला केही खराब कामहरू गर्न छनौट गर्नुभयो भने पनि।
आफैलाई बढ्नको लागि अनुमति दिनुहोस् र तपाईंको घाउबाट निको हुन।
अर्को व्यक्ति दु: ख महसुस वा संघर्ष को माध्यम ले जाने जरूरी तपाईंको जिम्मेवारी वा भावनात्मक भार बोक्न को लागी आवश्यक छैन। यसले सीमा सेट र लागू गर्न खराब बनाउँदैन कि निश्चित गर्न कि अन्य व्यक्तिको परीक्षणले तपाईंलाई नकारात्मक मानसिक स्थानमा तान्दैन।
यो खराब हुनुको यी विचारहरूलाई चुनौती दिन तल आउँछ।आफैलाई सोध्नुहोस्, 'मलाई यस्तो लाग्छ किन यसले मलाई नराम्रो मान्छे बनाउँछ?'
र अन्वेषण गर्नुहोस् कि तपाईंको कार्यहरू गलत छन् र त्यसैले तपाईं एक नराम्रो व्यक्तिको जस्तै महसुस गराउनुहुन्छ वा यदि तपाईं नकारात्मक भावनाहरूको गलत अर्थ लगाइरहनुभएको छ।
यदि तपाईं परिस्थितिको गलत अर्थ लगाइरहनु भएको छ भने, तपाईंले दिमागमा पुनः-फ्रेम गर्नको लागि तपाईंले स्वस्थ तरीका खोज्नु पर्छ। अन्य व्यक्तिको नकारात्मकता तपाईंको चरित्रको प्रतिबिम्ब होईन।
के यो सोच हटाउन गाह्रो छ कि तपाईं खराब व्यक्ति हुनुहुन्छ?
तपाईंको विचार सुधार गर्न ठूलो चुनौती हो, तर यो सम्भव छ। त्यहाँ केहि बुँदाहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नै बारेमा सोच्ने तरिका परिवर्तन गर्नका लागि विचार गर्नु आवश्यक छ।
तपाईंलाई प्रमाणित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरको सहयोग चाहिन सक्छ। धेरै व्यक्तिहरूको लागि, उनीहरूको नकारात्मक आत्म-धारणाहरू कुनै न कुनै बाल्यावस्था, जीवन, वा अनुभवहरूमा आधारित हुन्छन् जुन उनीहरू आफैंले देख्ने तरीकाले रंग्छन्।
निको हुन, आत्मसम्मान र मूल्यवान् बनाउनुहोस्, र यी चीजहरूबाट अगाडि बढ्न प्रायः ती परिस्थितिहरूले गर्दा हुने हानीलाई ठीक गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यो काम हुन सक्दैन जुन तपाईं आफैले गर्न सक्नुहुन्छ।
यसले समय लिन्छ। तपाईको बारेमा सोच्ने तरिका परिवर्तन गर्नु र एक व्यक्तिको रुपमा तपाई को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा रातारात हुने कुनै चीज होइन। यो एक लामो-अवधि को प्रतिबद्धता हो कि तपाईं मा लगातार काम गरिरहनु पर्छ।
यो एक प्रक्रिया हो जहाँ परिवर्तन ढिलो र वृद्धिशील हुन सक्छ। तपाईं केवल सानो लाभ बनाउन सक्नुहुन्छ जब तपाईं अगाडि साचो राख्नुहुन्छ, तपाईंको लक्ष्यको नजिक। त्यस बारे सचेत रहनुहोस् र यात्राको लागि आफैलाई तयार गर्नुहोस्।
यी प्रकारका विचारहरू सुधार गर्नुको मतलब तिनीहरू सदाको लागि गयो। आवेगपूर्ण विचारहरू परिवर्तन गर्न र नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ।
प्राय: जसो नभेटिएको जस्तो लाग्न सक्छ, तपाईको भावनात्मक सोच छ र तपाईले यसलाई खोल्नु पर्छ, त्यो सोचको जरामा पुग्नुहोस्, र तपाईको भावनालाई कुनै परिस्थितिमा प्रतिक्रिया दिन अघि पुन: क्यालिब्रेट गर्न दिनुहोस्।
समयको साथ, तपाईंसँग यी विचारहरूको कम र कम हुनुपर्छ।
यो जीवनको द्वन्द्व र कठिनाइहरूको सामना गर्न धेरै सजिलो हुन्छ जब तपाईं पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको जिम्मेवारी होईन र होईन। यसले सजिलै खराबीका ती भावनाहरूलाई छोडिदिन र यसलाई अधिक मूल्यवान् आत्म-मूल्यवान् भावनाहरूको साथ प्रतिस्थापन गर्दछ।
डेनियल ब्रायन फिर्ता आउनेछन्
गुणस्तर एक मानिस मा हेर्न को लागी
अराजकता मा शान्ति खोज को बारे मा उद्धरण
wwe समरस्लाम 2017 प्रत्यक्ष स्ट्रीम
उहाँको साथमा प्रेममा पतन को संकेत